Abasebenzi ukunakekelwa & isicelo Homecare
Textile Ukuphrinta isicelo
Iphepha Ukwenza isicelo
Paint & enamathela
Okunye isicelo zezimboni
Inkampani Isingeniso Brief
Unionchem is ezikhethekile ekukhiqizeni futhi yokuthengisa of high okukhethekile amakhemikhali. Umkhiqizo wethu ihlanganisa uhla hydrocolloids izinhlelo zokusebenza ezibanzi kuhlanganisa ukudla, yezimonyo, ukunakekelwa izisebenzi, yasendlini yokuhlanza, zendwangu, ukwenza iphepha, ngobumba, upende & enamathela, Oilfield, izimayini, njll. Umkhiqizo ngamunye ungumnikazi ukusebenza kakhulu futhi eyingqayizivele ukuqina, ukumiswa, ukulawula rheology, flocculation, njll e isicelo yayo eceleni.
Sizimisele ukwakha futhi unikeze izinga okusezingeni nemikhiqizo kwemvelo enobungane. Ukukhiqizwa kuyaqashwa nge ISO9001 ukuphathwa izinga system.Quality lilawulwa kusuka impahla eluhlaza kuya lokugcina product.Production design futhi luhlobo isihambile ukuhlangabezana kwamazinga amazwe ngamazwe nekhwalithi kuhlolwa nokulawula lab.equipped ekukhiqizweni indawo. Ikhwalithi umkhiqizo kanye service bavunyelwa kahle amakhasimende phesheya.
We ahlele ezokuthutha onokwethenjelwa futhi okusheshayo & ukulethwa kumakhasimende ethu. Komkhiqizo ngokuphepha ivikelwe efanele izinga packing.We ukugcina esitokisini ezihlukahlukene imikhiqizo yethu Warehouse kwethu ukuqinisekisa ukulethwa ngesikhathi esifanele futhi iphephile.
Ithimba lethu abanolwazi ingasebenza namakhasimende ngesicelo sabo ethize noma sebhithi ngokomthetho futhi ukuphakamisa umkhiqizo ngokwezifiso nge umfanekiso nedatha, ngempumelelo sokuyokhonza amakhasimende ethu ngomkhiqizo ukuhambisana.
Nokuzinikezela esigcwele ku imikhiqizo yethu, sihamba phambili ukuba umenzi professional kunazo nabaphakeli in high, izindleko sokudiliva esiphumelela futhi ifike ngesikhathi.
bavumelana newsletter yethu
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Umhlahlandlela - Hot Products - Ibalazwe - AMP Ucingo
Condiments Soy Sauce, Oilfield Chemical , Water Treatment, Corrugation Starch Gum Powder, Leakoff Control, Screen Printing Paste,